Toast ( ကွမ်းပို့ စ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Toast ( ကွမ်းပို့ စ်)
Toast ( ကွမ်းပို့ စ်)
Posted by မောင် ပေ on Jul 5, 2011 in Creative Writing, Think Different |4comments
Toast (noun) an act of toasting : Let’s drinkatoast to our friends ! ( verb ) to drink ceremonially in honour of , or to wish success to ( someone or something ) : we toasted the bride and bridegroom\_the new ship
အနောက်နိုင်ငံ များတွင် တော့ ယမကာ တစ်ခုခုသောက်ကြတိုင်း toast လုပ်လေ့ ရှိသည် ဟု ကြားဖူးသည် ။ ယနေ့ ခေတ် မြန်မာပြည် တွင်လည်း toast လုပ်နေကြပြီ ဖြစ်သည် ။
` ရည်းစားချစ် ၊ စီးပွားဖြစ် ၊ ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ် ….. cheers ! ´
ချာတိတ် တစ်သိုက် ဘီယာခွက်တိုက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည် ။
ဘေးချင်းကပ်ရပ် ၀ိုင်းတွင် ထမင်းထိုင်စားနေသည်မို့သူတို့ ပြောသမျှ အကုန်ကြားနေရသည် ။
` ရည်းစား က လည်းချစ်ရမယ် ။ စီးပွား ကလည်း ဖြစ်ရမယ် ။ ဘာမှ မလုပ်ပဲနဲ့ ကို သူဌေး ဖြစ်ရမယ် … အင်း..သူတို့ လေးတွေ ရဲ့ toast မဆိုးပါလား ´ ဟု စဉ်းစားမိသွားသည် ။
ရည်းစား ချစ်ဖို့ ဆိုရင် ရည်းစား တစ်ယောက် တော့ ရှိဖို့ လိုမယ် ။ ကောင်မလေး တစ်ယောက် က ကိုယ့်ကို ပြန်ကြိုက်မှ ပြန်ချစ်မှ ရည်းစား ဖြစ်မည် မဟုတ်လား ။ ကောင်မလေး ကိုယ့် ကို ချစ်ဖို့ ဆိုတာကလဲ ထိုကောင်မလေး ကိုယ့် ကို ချစ်နိုင်လောက်အောင် ကြိုက်နိုင်လောက်အောင် ကိုယ့်ဘက်မှာ အရည်အချင်း သော်လည်းကောင်း ရုပ်ရည်သော် လည်းကောင်း ရှိရမည် ။ အနည်းဆုံးတော့ သန့် သန့် ပြန့် ပြန့် လေး ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတော့ ရှိရမှာပေါ့နော် ။ ဒါမှ လည်း ကိုယ် က သွားမကြိုက်တောင် ကိုယ့်စတိုင်လ် ကို ကြိုက်မိခိုက်မိသွားပြီး ကိုယ် နှင့် ရည်းစား ဖြစ်လို သည့် ကောင်မလေး များ ရှိလာနိုင်မည် မဟုတ်လား ။
စီးပွားဖြစ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုခုသော်လည်းကောင်း ၊ အလုပ် တစ်ခုခု သော လည်းကောင်း ရှိနေမှ ဖြစ်မည် ဟု ထင်မိသည် ။ စီးပွားဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ငန်း က ၀င်ငွေတိုးတက်လာခြင်း ၊ ကိုယ့်စီးပွားရေး ကို အားပေးသည့် ၀ယ်သူ အားပေးသူ များ တိုးပွားလာခြင်း ၊ ၀န်ထမ်း လုပ်နေသည် ဆိုလျှင်လည်း ရာထူးတက်ခြင်း ၊ လခ တိုးခြင်း သို့ သည် စီးပွားဖြစ်သည် မဟုတ်လား ။ ဘာအလုပ်မှ မလုပ် ပဲ နဲ့ တော့ စီးပွားဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းနေလျှင် တော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ဟု ထင်မိသည် ။ တာရာမင်းဝေ ၏ စကားတစ်ခွန်းရှိသည် ။ ` ထိုင်နေရင်း အလုပ်ဖြစ်သွားတာတော့ ကြက်မတွေပဲ ရှိတယ် ´ ဟူ ။
ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ်ဖို့ ကတော့ တော်တော့် တော်တော် ကို မလွယ်တဲ့ ကိစ္စဟု ထင်မိသည် ။ ထီထိုးပေါ့ ဟု ဆိုလာလျှင် တော်တော့် တော်တော် ကို ကံကောင်းဦးမှ အနည်းဆုံး ၁ သိန်းဆု ပေါက်မည်သာ ။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ်ဖို့ ဆိုလျှင်တော့ ရှေးဘ၀ က ကုသိုလ်ကံ တော်တော် ကောင်းမှ သာ ဖြစ်နိုင်မည် ။ သို့ မဟုတ် ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း ထဲ မှ ဘောစိ တစ်ယောက် နေရင်းထိုင်ရင်း လျှော သွားပြီး ၊ ကိုယ့်အတွက် သေတမ်းစာ ရေးပေးထားခဲ့သဖြင့် အမွေရလျှင် တော့ ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေး ဖြစ်နိုင်သည် ။ ကိုယ် ချမ်းသာ ဖို့ အတွက် ကိုယ့် အမွေ ပေးမည့် သူ သေဖို့ မျှော်လင့်ခြင်းသည် ကောင်းသောအလုပ် မဟုတ် ။ လမ်းမှာ သွားရင်း ရွှေထုပ် ကောက်ရဖို့ ဆိုတာကလည်း သိပ်မဖြစ်နိုင် ။ ကောက်ရခဲ့လျှင် လည်း ပိုင်ရှင် ရှိ ပစ္စည်း ဖြစ်နေသဖြင့် စိတ်သန့် မှာ မဟုတ် ။ ပြန်ပေးလိုက်မည်သာ ။ သို့ ဆိုလျှင် ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ်ဖို့ က တော့ ထီ ထိုးရန်သာ ရှိသည် ။ ထီ က လည်း ထိုးမည် ဆိုမှ ဈေးတွေ တက်နေသည် ။
` သြော်..ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ်ဖို့ တောင် မှ ထီထိုးစရာ ပိုက်ဆံ ရှိဖို့ လိုသေးတာပါလား ။ ကဲပါလေ ဂေဇက်မှာ တင်ဖို့ ရေးစရာလေး တစ်ခု တော့ ရတာ အမြတ်ပဲ ။ ဒီနေ့ မောင်ပေ ကံကောင်းပါလား ´ ဟူ
ဘေးချင်းကပ်ရပ် ၀ိုင်းတွင် ထမင်းထိုင်စားနေသည်ကို ကြားနေရသော မောင်ပေသည်လည်း ၎င်းဝိုင်း၏ ဘေးဝိုင်းတွင် ထမင်းစားနေလိမ့်မည်ကို မြင်ယောင်နေမိပါသည်။ အဲဒါဆို ` ရည်းစားချစ် ၊ စီးပွားဖြစ် ၊ ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ် ‘ နေလောက်မှာပါ။
မိန်းမချစ် ၊ စီးပွားဖြစ် ပြီးရင် KTV လစ် ဟိဟိဟိ
ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ်တာပျော်စရာပါ။
သူဌေးဖြစ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်တာကော……….